Faallo: Ciidan XDS oo mushaar iyo Raashin la, aan ah iyo Qabsashada Al Shabab ee Balcad yo Dhanaane- Maxaa ku xiga? Akhriso. - Muqdisho Online
Home Wararka Faallo: Ciidan XDS oo mushaar iyo Raashin la, aan ah iyo Qabsashada...
Faallo: Ciidan XDS oo mushaar iyo Raashin la, aan ah iyo Qabsashada Al Shabab ee Balcad yo Dhanaane- Maxaa ku xiga? Akhriso.
Iyadoo uu xalay been cad u akhriyey koox isdhexgal lagu sheegay R/Waasaare Kheyre ayaa waxaa la sheegay inuu ku tuuntuunsaday in aysaan jirin cid xuquudooda mushaar ay ka maqn tahay. Waa yaaabe RW beenta intaas la eg miyuusan ogeyn inayku dhimaneyso intaa uusan ka tagin goobtii uu ku sheegay. Akhri maqaalka
Somaliya waxaa ku socda isbadallo waa weyn oo dhinacyo badan leh oo qaarkood ay isla socdaan, kuwana is diidan yihiin o iska hor imanaya. Marka xaaladda gudaha laga hadlo waxaa muuqata inay Shabab Xamar kaabiga ku hayaan oo ay qabsan doonaan dhammaan magaalaada sababahan dartood:
Dowladda oo gabtay dhamaan wixii dowlad laga rabay sida ilaalinta ammaan dadka iyo hantidooda, xayuubinta xurriyadaha, dhaqdhaqaaq, shaqo iyo hadal ee ay soo rogtay, dhaca iyo boobka hantida dadka deggan gobolka Banaadir oo ay madaxda dawladdu wadaan, musuqmaasuqa iyo ku takrifalka canshuuraha sida adag lagu bixiyey.
Dowladda oo aan ciidankeedii mushaahar u hayn oo lacagahii xataa caalaamka ugu talagalay ka lunsatay.
Ciidankii NISA ee wararka iyo xuuraanta ka keeni lahaa Shabab oo la shabaabeyey, gacantana loo geliyey shakhsi shabaabka ka tirsan.
Shabaabka oo hadda ka ah Xamar maxkamadaha loo xukun tago oo dadka caddaalad wax ugu kala gooya, oo xataa kuwa madaxda ah ee shacabka dhul iyo guryo ka qabsadaa si sahal ah ay uga saaraan.
Ganacsatada oo ku khasbanaaday inay shabaab la shaqeeyaan canshuurna siiyaan.
Arrimahan oo dhan waxay keeneyaan maahmaahdii ahayd “nin ku dhacaya (xildhibaan, wasiir, iyo ganacsade dowladda la shaqeysta) kii kaa dhaciya (shabaabka) ayaa kaa xigahaya”.
Arrimaha dibadda iyo Xuduudaha
Dalka xuduudo ma leh waxaa meelo iska furan oo cid cid ka ceshataa ma jirto. Waxaana uu u bannaan yahay cidii awood u leh inay soo gasho sida maandooriyayaasha oo aan dhabba fudud u nahay iyo xataa dhallinyaro badan ku hoobtay maandooriyayaasha sida fudud dalka u soo dhexmara.
Kenya, Itoobiya, Imaaraadka iyo Erateriya mas’uulkoodii doonaa magaalada uu rabo ayuu ka dagayaa cidii uu rabo ayuu la kulmayaa. Ciidanka waddamadaas cidii ay doonaan ayey dilaan sida Mareykanka iyo Kenya oo ay dayuuradahooda si arxan darra ah u laayaan shacbiga kadibna ku sheegaan inay shabaab dileen.
Ugaarsiga shabaab ee gobollada waxay iyana keentay inay shabaabka ku soo ururaan magaalooyinka sida Muqdisho oo ay shacbiga ka mid noqdaan maalintey doonanna waxay rabaan ka fuliyaan magaalada iyo shacabka dhexdooda.
Waddamada Gobolka iyo IGAD oo aad moodo inay isku dan yihiin si Somaiya loo kala jarjaro ama la wada qaato.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay oo magacaabay ergay gaar ah oo qaabilsan arrimaha Geeska Afrika, halkii laga sugayay in ergay gaar ah loo soo magacaabo Soomaaliya. Sababtuna waxay tahay maxaaba keenaya in hogaamiye Somaliyeed oo miirlaawe ah uu eryi karo iyo in dalka uu gacanta u galo IGAD oo uu yahay maxamiyad Addis Ababa laga xukumo.
Markii MOL ay ka hortimid eryiddii Wakiilkii QM Nicholas Haysom dad badan ayaa ka horyimid Muqdisho Online oo lahaa waxaa tihiin mucaarid oo eryidda waxay ahayd sax. Hadda waxaa la soo magacaabay ruux haysta awood uu wuxuu doono kaga fulin kara dalka ciidan, taageero siyasadeed iyo mid dhaqaale maxaan ka dheefnay talaxumadii Farmajo ee loo sacbiyey? Miyeysan la mid noqon boodboodkii habeenkii sida khaldka ah loo doortay?
Isku duub Booqashada Madaxweynaha Faransiiska ee dalalka Geeska, tan Ismaciil Cumar Geele ee Xamar, tan wasiir dibadeedka Eratariya ee “Somaliland” iyo socdaallada kale ee geeska ka dhacayaa waxay u durbaan tumayaan ujeedooyin nagu wajahan balsa waqtigan naga qarsoon, kuwaas oo madaxdii noo garan lahayd uusan garaadkoodu dhaafsiisnayn inay caasimahada dalalka na hodayaa ay booqasho ku tagaan ama been iyo faan fagaaryaasha isla soo taagan. Sidoo kale waxaa jirtaa in dalkeennu anu lahayn dad u fekera oo soo saara qoraallo iyo falanqeyn wax u ifinta karta shacbiga oo haddii la jiheeyo awood u leh inay dalkooda iy dadkooda badbaadsadaan.
Haddaba waxaa dhawaan dalka ka dhacaya arrimahan oo haddii uu midkood dhaco kuwa kale sababi doona:
Waxaa iska carari doona AMISOM oo xataa si habqan ah u bixi doona, taas oo keeni doonta inay dad badan nooga dhintaan bixistooda kadib markii dhaqaalaha haddaba la yareeyey laga goosto waana sirta hoose ee ka socotaa caasimadaha dalalka deeqaas bixiyaa.
Madaxda hadda joogtaa oo tikidhadoodii noqoshada dalalkii ay ka yimaadeen ay ugu jiraan jeebka dambe oo AMISOM horay u sii raaaci doona, inta ka horreysana noo beenguuri doona si aynu ugu maleyno inay yihiin waddaniyiin wax noo qabanaya, sida Farmajo, Kheyre, Mursal, Fahad, Goodax iwm.
Mareykanka oo sidii 1993 hal habeen kala bixi doona ciidanka yar ee ka jooga Somaliya.
Shebaab oo koofurta oo dhan qabsan doona, balsa Xamar ku horreyn doona kadibana waddama EU, Carabta iyo IGAD oo ay Itoobiya, Kenya, iyo Erateriya horkacayaan ay aqoonan doona shabaab wadahallana la furi doona.
Ama tan dambe lidkeed inay dhacdo oo Shabaabka la iska caabiyo , laakiin Somaliya ay dagaal sokeeye oo hor leh gashaa birtana la iska also, kadibna ay nagu fusho dantii na laka lahaa oo ahayd in nala ku daro Itoobiya, sucuudigana uu noqdo dalka ugu horreeya ee aqoonsadaa arrintaas, dhaqaale degdeg ahna ku bixiya taabbagelinteeda iyo dhameystirkeeda. [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=UkVhYMZy_14[/embedyt]
Previous articleAl shabaab oo lawareegay gacan kuhaynta deegaanka Busaari ee Gobalka Gedo
Next articleAxmad Madoobe: “hadii Farmaajo garan wayay in uu Kismaanyo yimaado aniga aya Xamar ugu tagayo”